Ukuhlala kwizingqisho zamaza - I-Airbnb
Ukuhlala kwizingqisho zamaza
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguLinda
Indawo yethu isecaleni komlambo nokutshona kwelanga okumangalisayo kwaye umhlaba wethu ongasemva ngokukhethekileyo ulwandle. Indawo yabakhenkethi enezinto ezininzi ezenziwa phandle. Kufuphi neendawo eziliqela onokuya kuzo uhamba ngeenyawo ezintabeni okanye kwi-Métis Garden. Sisebenza ngqo kwiNdlela des Arts, ngoko zininzi igalari yezobugcisa. Kukho umgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya kwindawo eyenza utywala, umqolomba ne-pizzeria. (Ukusungulwa 304573)
Vula iflethi okanye indlu ekwicomplex, igumbi lokuhlala elitofotofo, ikhitshi elinobubele kakhulu kunye negumbi lokutyela apho kulungile ukuhlala khona. Amagumbi okulala ayi-2, elinye elijongene nolwandle kunye neengqungquthela zokukuvumela ukuba uve ulwandle kwaye ulale kwisingqi samaza (ibhedi enkulu), elinye icala leNdlela des Arts (iibhedi ezi-2 ezilala umntu omnye okanye sibabonise ukuba benze ibhedi enkulu). Igumbi lokuhlambela kuquka indawo yokuhlamba iimpahla liphakathi kwamagumbi okulala ayi-2. Kukho inyama eyojiweyo yamalahle enokusetyenziswa ngumntu wonke ohlala kule ndlu, kunye neetafile zepikiniki nezitulo zaseAdirondack.
75" HDTV ene-I-Netflix
Ste-Flavie, isango lokuya eGaspésie, ilali yamagcisa, eyaziwa ngobugcisa bayo kunye nolwandle lwayo. Indawo yokutyela kunye neyokwenza utywala kumgama wokuhamba. Nemisebenzi emininzi uhlobo iyafumaneka kufutshane ... umthambo park buthelezi kwamanzi, ipaka zabantwana, ukunyuka intaba, umjikelo mendo, igalufa, Kayak kunye nerenti ibhodi, umthi-to-umthi imidlalo, iimarike zikawonke kwaye ke inani elikhulu zobuciko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sainte-Flavie